आफैं औषधि किनेर खाँदा ठूलो क्षति - Sawal Media Sawal Media
आइत, कार्तिक ७, २०७८
आफैं औषधि किनेर खाँदा ठूलो क्षति
१० जेठ, काठमाडौँ – बुटवल गोलपार्कका ५८ वर्षीय पुरुषलाई सामान्य ज्वरो आयो। घरमै रहेको सिटामोल खाएपछि हल्का भएको ज्वरो फेरि अर्को दिन आयो। फेरि औषधि खाए। अर्को दिन शरीर दुख्यो। अनि सामान्य खोकी पनि लाग्यो।
शरीर कमजोर हुँदै गए पनि उनी कोरोना परीक्षण गर्न गएनन्। छैटौं दिन उनी उठ्नै सकेनन्। अक्सिजनको तह ८० भन्दा तल पुगिसकेको थियो। परिवारका सदस्यले घरमै अक्सिजन पु¥याएर दिए। तर, उनमा केही सुधार भएन। केही समयमै उनलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुर्याए। अस्पतालमा भीडभाडले उनले बेड पाएनन्।
बेड खोज्दा खोज्दै आधा दिन बित्यो। एम्बुलेन्समा राखिएका उनलाई भैरहवातर्फ लगियो। तर, अस्पतालसम्म पुग्न पाएनन्। एम्बुलेन्समै उनको निधन भयो। प्रादेशिक अस्पताल आएपछि कोभिड परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। ‘बुवाले अस्पताल जान समयमै नमान्दा बचाउन सकिएन,’ उनका छोराले भने।
बुटवल–११ का दीपक ज्ञवाली १० वैशाखमा ज्वरो आएर मेडिकल पुगे। मेडिकलका चिकित्सकले उनलाई टाइफाइड ज्वरो भन्दै औषधि दिए। दुई दिन खाए, ज्वरो निको भएन। उनका दाजु फेरि मेडिकल पुगे र भाइलाई सुधार नभएको बताए। मेडिकलका चिकित्सकले सात दिनको औषधि खाए ठीक हुन्छ भनेर फर्काए। बिहेको तरखरमा रहेका उनी ज्वरो आउँदासमेत केटी हेर्न गुल्मी पुगे। वैशाख १५ गते औषधि खाएरै बिहे मण्डपमा बसे। उनको स्वास्थ्य कमजोर भयो। बिहे मण्डपबाटै उनलाई अस्पताल लगियो। तर, अस्पतालबाट फर्किएनन्। आईसीयूमा पुगेका उनको २९ गते मृत्यु भयो।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
Spread with others:
अब नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोपको परीक्षण गर्न पाईने
धरानमा अखाद्यवस्तु विक्री वितरण
कोरोनाले रोजगारी खोसिने चिन्ता
हेर्नुहोस २०७६ साल फागुन ५ गते र फागुल १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु, के निर्णय गर्यो बाँस्कोटा घुस काण्डको ?
एमाले स्थायी कमिटी बैठक आजका लागि बोलाइयो
वामदेवको मन्त्री बन्ने चाहनामा अन्तरिम आदेश तत्कालका लागि तगारो
मोहनप्रसाद ओलीले भने, मेरै छोरोले पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँछ
अमेरिकामा विश्वविद्यालयमा गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु, सात घाइते
प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक कात्तिक १५ गतेसम्म स्थगित
दिउँसै गोठमा छिरेर बाघले चौपाया मारेर खान थालेपछि …
बाढीपीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल
ओलीको हातबाट टिका लगाएर एमाले प्रवेश गर्दै चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई
मोहनप्रसाद ओलीले भने, मेरै छोरोले पाँच वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँछ 12 views
धुलिखेलको जिपलाइनमा दंग प्रचण्ड 12 views
गुरुयोजना बनाएर पीडितका समस्या सम्बोधन गर्छु : प्रधानमन्त्री 11 views
समीक्षा अधिकारी भनिन्, पल र मबीच कुनै प्रकारको अनैतिक सम्बन्ध छैन9views
दसैँका लागि रुट इजाजत खुला9views
कर्णालीमा जीप खस्दा दम्पती बेपत्ता, ३ जना गम्भीर घाइते
कोरोनाबाट मृत्यु हुने वृद्धवृद्धाको संख्या बढी
कर्णालीमा ९५ प्रतिशत सङ्क्रमितले जिते कोरोना
सरकारले स्वीकार गरे दशैंमा लकडाउन !
एमालेमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने प्रयास
मुख्य कार्यालय : काठमाडौँ, नेपाल (बाग्मती प्रदेश )
सम्वाददाता : ज्योति सुवेदी
सम्वाददाता : नेत्र माया मगर